Hub u socday Al Shabaab oo dhex lagu qabtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliska Nabadsugida ee Dowlad goboleedka Galmudug ayaa Magalada Dhuusamareeb oo ah Xarunta Gobolka Galgaduud waxa ay kusoo bandhigeen hub ay sheegeen in loo waday Ururka Al-Shabaab.
Laamaha Amniga Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in hubkaas oo rasaas u badan lagu waday Gaari hoomey ah oo ka yimid dhinaca Gobolka Bari,isla markaana ku wajahnaa deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan oo ay Al-Shabaab maamulaan.
Sidoo kale saraakiisha ku sugnedy goobta hubkaasi lagu soo bandhigayay ayaa waxa ay sheegeen in baaritaan ay ku wadaan hubkaas iyo gaariga lagu waday,isla markaana waxyaabaha kasoo baxa ay Warbaahinta la wadaagi doonaan.
Si kastaba warkaan kasoo baxay Nabadsugida Galmudug ee ku aadan inay gacanta ku dhigeen hub loo waday Al-Shabaab ayaa weli dhankooda aysan ka hadlin Ururka Al-Shabaab.
Somaliland oo ka hadashay wadahadalka Somalia